မော်ရိုကို: မော်ရိုကို၏မျက်နှာသာအတွက်တြိဂံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှကျူးလွန်ခဲ့သော - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ "မော်ရိုကို: မော်ရိုကို၏မျက်နှာသာအတွက်တြိဂံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှကျူးလွန်ခဲ့သော
Tele RELAY တစ်ခု4ခုနှစ်ဧပြီလ 2019
မော်ရိုကိုအာဖရိက၏ပေါ်ပေါက်ရေးအရှိန်မြှင့်ဘို့တစ်တြိဂံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှကျူးလွန်သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး, မိုဟာမက် Methqal များအတွက်အဘိဓါန် Moroccan အေဂျင်စီ၏ Marrakech, သံအမတ်ကြီး, ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အတွက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကပြောခဲ့သည်။
"အမြားအာဖရိကနိုင်ငံများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသူ၏အတွေ့အကြုံကိုအားနိုငျငံတျောမြို့တော်မြှင့်တင်ရန်အတွက်ကြောင့်အခြားသူတွေအကြားဖြစ်, အာဖရိကပေါ်ပေါက်ရေးအရှိန်အဟုန်မြှင့်ဖို့လူဦးရေများအတွက်အကျိုးရှိသောတြိဂံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရန်၎င်း၏ကတိကဝတ်ကိုဆက်လက်ဦးမည် လူ့, အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးရေး, စွမ်းအင်နှင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတိုက်ဖျက်ရေးမှဝင်ရောက်ခွင့်, "ဘက်ပေါင်းစုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဘဏ်များ၏အခန်းကဏ္ဍကိုခိုင်မာရေးနှင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအေဂျင်စီများအားပေးမှုအပေါ်တစ်ဦး conference မှာမစ္စတာ Methqal ကပြောပါတယ် တောင်ပိုင်းအဘိဓါန် South ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်တြိဂံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစ္စလာမ့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (IDB) ၏နှစ်ပတ်လည်44èmeအုပ်စုတစ်စုအစည်းအဝေးပြင်ပမှာကျင်းပသည့်ရေရှည်တည်တံ့သည့်ဖွံ့ဖြိုးရေးရည်မှန်းချက်များ (SDGs), အောင်မြင်ရန်။
သူသည်ဤအခါသမယတွင်, သူတို့စည်းလုံးညီညွတ်မှု, အပြန်အလှန်လေးစားမှုနှင့်ဘုံစံနမူနာ၏မြှင့်တင်ရေးတို့ကမှတ်သားထားတဲ့သည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်, မော်ရိုကိုနှင့်လောကနှင့် Multi-ရှုထောင်ဆာဟာရအာဖရိက၏နိုင်ငံအကြားဆက်ဆံရေးဖော်ပြခဲ့သည်။
"1986 မှစ. , မော်ရိုကိုပု AMCI, မိတ်ဖက်နိုင်ငံများနှင့်အတူနိုငျငံတျော၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအထောက်အကူပြုခြင်းနှင့်ခိုင်ခံ့စေခြင်းငှါ, နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့်အတူအနီးကပ်ညှိနှိုင်းအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ tool ကိုဖန်တီး," မစ္စတာကပြောပါတယ် Methqal, အမျိုးသားရေးအရှိန်အဟုန်ကို support နှင့်၎င်း၏အနာဂတ်ဆွဲယူသောအားကြီးသောသစ်တစ်ခုအာဖရိက၏ပေါ်ပေါက်ရေး, အထောက်အကူပြုရန်, အထူးသဖြင့်အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူထုအခြေပြုလူ့အဖွဲ့အစည်းထူထောင်ထားပါတယ်သည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ဒီသဘောဖြစ်ပါသည်, ထို AMCI အဆိုပါအဘိဓါန် Moroccan လက်ရာလက်မျှဝေမှုအတွက်အဓိက tool ကိုဖွစျဖို့သတ်မှတ်ထားကြောင်းဖြည့်စွက်, အာဖရိကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၏အရှိန်အစေခံရန်ချဲ့ထွင်ခဲ့သည့်မော်ရိုကိုနှင့် IDB အကြားသမိုင်းဝင်မိတ်ဖက်, ကြိုဆို အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအတူ။
နှစ်နိုင်ငံနှင့်တြိဂံဖက်ရှင်အတွက်အာဖရိကနိုင်ငံများနှင့်အတူအဘိဓါန် Moroccan ကျွမ်းကျင်မှုမျှဝေပါဝင်ပတ်သက်နေသည့် AMCI ၏ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု၏အဓိကဒေသများပြန်လည်သုံးသပ်မစ္စတာ Methqal ပညာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌သတိပြုထံမှ 30.000 ကလူ အာဖရိကနိုင်ငံများ 47 1986 ကတည်းကလူထုအဆင့်မြင့်ပညာရေး၏အဘိဓါန် Moroccan အဖွဲ့အစည်းများ၏လက်ခံသူများဖြစ်ကြသည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပတ်သက်. အများပြည်သူကဏ္ဍအချို့ 5.000 အာဖရိကအမှုဆောင်အရာရှိဟာ AMCI နှင့်အရေးပါသောအကဏ္ဍများ (ရေ, လျှပ်စစ်မီး) တွင်ယင်း၏နည်းပညာဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များကဆောင်ရွက်စွမ်းရည်အဆောက်အဦအစီအစဉ်များမှအကြိုး, သူအောင်ကပြောသည် တရာရေရှည်တည်တံ့လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်းများကိုလူမှုရေးကဏ္ဍများတွင်ပံ့ပိုးမှုနှင့်နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပျမ်းမျှအားနှစ်စဉ်အပေါ်တစ်ဒါဇင်နိုင်ငံတွေကိုဖုံးသောခဲ့ကြသည်ကိုစောင့်ရှောက်မည်
သူ AMCI မှတဆင့်, မော်ရိုကိုမှကျူးလွန်အားလုံးပြည်နယ်နှင့် Non-ပြည်နယ်စည်းလုံးဖို့, တောင်အဘိဓါန် South ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်စေ့စပ်သရုပ်ဆောင်များကိုတစ်အမျိုးသားရေးကွန်ယက်ကိုဖန်တီး institutionalize ရည်ရွယ်သူကဆက်ပြောသည် တောင်ပိုင်းအဘိဓါန် South ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု။ ဤကွန်ယက်, အတွေ့အကြုံများဝေမျှသတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်လွယ်ကူချောမွေ့နှင့်ရန်ပုံငွေစည်းရုံးခြင်းများနှင့်လုပ်ရပ်များနှင့်ပူးတွဲအစပျိုး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုမြှင့်တင်ရန်မျှော်လင့်နေသည်။
မိမိအစိတျအပိုငျးအဘို့, ပြည်တွင်းစွမ်းအင်နှင့်ကျေးလက်ဒေသလျှပ်စစ်ဓာတ်အား၏ဖွံ့ဖြိုးရေး Mamadou Ouattara, အထွေထွေဒါရိုက်တာအဆိုပါမာလီအေဂျင်စီ (AMADER) ၏ကျွမ်းကျင်မှုအနေဖြင့်အကျိုးအမြတ်မာလီအတွက်ကျေးလက်ဒေသလျှပ်စစ်မီးစီမံကိန်းများကိုမီးမောင်းထိုးပြ မော်ရိုကို, ဒီသဘောမျိုးထဲမှာ, ဝန်ဆောင်မှုစီမံကိန်းများကို AMADER မှာယင်း၏ကျွမ်းကျင်မှုထားသည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ကုလသမဂ္ဂနှင့်တောင်ဘက်-တောင်ဘက်နှင့်တြိဂံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ဆက်ပြောသည်တန်ဖိုး။
သူ AMADER ကျွမ်းကျင်မှုများမြင့်တက်လာရန်လည်းရည်ညွှန်းပိုကောင်းမာလီတစ်လျှောက်လုံးအသိုင်းအဝိုင်းချိတ်ဆက်ဖို့ကျေးလက်လြှပျစစျမီးတစ်ကျေနပ်တွင် track record ရှိပါတယ်သည့်မော်ရိုကို၏အတွေ့အကြုံအားဖြင့်မှုတ်သွင်းခံခဲ့ရသည်ဟုဆိုသည် ကုလသမဂ္ဂအဘို့ဤစီမံကိန်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်အဖွဲ့များဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှုများနှင့်ပုဂ္ဂလိကအော်ပရေတာစက်ရုံမန်နေဂျာ၏ရွေးချယ်ရေးမှတဆင့်လှူဒါန်းခဲ့သည်။
ဘုရင်ကမိုဟာမက် VI ကို၏ပြည်ခိုင်ဖြိုးအောက်တွင်ကျင်းပ, အစ္စလာမ့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်အုပ်စု (IDB) ၏44èmeနှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးတွင် ": အစဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရည်မှန်းချက်များတစ်ခုခရီးတစ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ကမ္ဘာကြီးထဲမှာအသွင်ပြောင်း" နဲ့ဆက်ဆံရေးမှာ။ သုံးရက်များ၏အစည်းအဝေး, "တန်ဖိုးကိုကွင်းဆက်ဟာ IDB ၏ငါးနှစ်အစီအစဉ်လေးမရှိမဖြစ်တိုင်အမည်ရ" Public Private Partnership "," သိပ္ပံ, နည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု "ခွဲစိတ်ဖို့အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါသည် ကမ္ဘာ့ဖလား "နှင့်" အစ္စလာမ့်ဘဏ္ဍာရေး "။
ဤနေရာတွင်မော်ရိုကိုနှင့် ပတ်သက်. ===> ပိုဆောင်းပါးများ <===
Coupe de France: ပဲရစ် Nantes (3-0) ဖယ်ရှား
ဤတွင်အယ်လ်ဂျီးရီးယား Abdelaziz Bouteflika လူများ၏အပြည့်အဝစာတစ်စောင်ရဲ့ - ကင်မရွန်းမဂ္ဂဇင်း